လက္ကား ခရမ်းရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm) ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူ |ရိုးသားဖြူစင်သည်။
အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးပြည့်မီသော acrylic မှန်တစ်ချပ်ကို ပံ့ပိုးပေးရုံသာမကဘဲ အထွေထွေအသုံးပြုမှုနှင့် ပြင်ဆင်ချိန်အတွင်း ခြစ်ရာများကို ကာကွယ်ပေးသော acrylic မှန်ကို စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အပြင်းထန်ဆုံးနှင့် eco-ဖော်ရွေသော အကာအကွယ် back-coating ဖြင့်လည်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။လက်တွေ့တွင်ဖြစ်စေ အလှဆင်ခြင်းအပလီကေးရှင်းတွင်ဖြစ်စေ ကွေးခြင်း၊ ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် ကွေးထားသောမှန်များ လိုအပ်သည့်အခါ ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည် အသုံးဝင်သည်။
● Self-adhesive၊ ခိုင်ခံ့ပြီး အကြမ်းခံသောအပေါ်ယံပိုင်း
● အလင်းရောင် အားကောင်းခြင်း။
● တောက်ပပြီး ချောမွေ့သော မျက်နှာပြင်
● အထူးခံနိုင်ရည်ရှိသော အပေါ်ယံနှင့် ပန်းချီကားများ
● အခြားပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများထက် ဓာတုခံနိုင်ရည်ကောင်းမွန်သည်။
Acrylic မှန်တစ်ချပ်၊ အလှဆင်ခြင်း၊ ပြကွက်ပြသခြင်းနှင့် အရောင်းပွိုင့်ရောင်းချခြင်း၊ အမြင်အာရုံရောင်းချခြင်း၊ ဂစ်တာများအတွက် အကာအရံများရွေးချယ်ခြင်း၊ စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်း၊ အစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးချမှုများနှင့် ပေါ့ပါးသောဘေးကင်းရန် လိုအပ်သည့်နေရာများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။ acrylic ပလပ်စတစ်စာရွက်၏ကွဲအက်ခြင်းခံနိုင်ရည်နှင့်။ကျွန်ုပ်တို့၏ acrylic mirrors များသည် အမြင့်မားဆုံးသော စီးပွားဖြစ်အရည်အသွေးဖြင့် ရရှိထားပြီး တူညီသောစာရွက်အထူရှိသည့် မှန်များထက် 17 ဆခန့် ပိုကြီးသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အပြင်းထန်ဆုံးသော အကာအကွယ်နောက်ထပ် coating ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည် - acrylic mirror များအတွင်း ခြစ်ရာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အထွေထွေအသုံးပြုမှုနှင့်ပြင်ဆင်မှု။
1. ငါလိုချင်တဲ့ အရွယ်အစားကို စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်မလား။
2. Acrylic မှန်ကို ထိုနေ့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိထုတ်ကုန်များနှင့်အညီ ၎င်းကို သင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား။
အဖြေ- ဟုတ်ပါသည်၊ အတည်ပြုရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာရှင်များထံ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို ပေးပို့ပါ၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ပုံများနှင့် ပုံများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။
ယခင်- အပြာရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)
နောက်တစ်ခု: အနီရောင် Acrylic Mirror Sheet (0.6mm-10mm)